Warshadda soo -saareyaasha taleefannada Shiinaha iyo soo -saareyaasha | SJJ
Warshadeenu waxay bixisaa noocyo kala duwan oo soo jiidashada taleefanka gacanta ah oo ka samaysan waxyaabo bir ah. Soojiidashada taleefanka birta ayaa lagu heli karaa naqshad 2D ama 3D ah. Tirada kartoonada ama mascot -ka caadada u ah iyo astaanta ayaa dhammaantood lagu dabaqi karaa.
Waxaa jira qaabab kala duwan oo soo jiidasho leh Pretty Shiny ayaa soo saari kara. Soojiidashada taleefanku waxay caadi ahaan ku xiran yihiin aaladda moobiilka iyada oo loo marayo isku xiraha taleefanka ama silikoon silikoon, taleefannada qaar ayaa laga yaabaa inay leeyihiin dalool wareeg ah oo suunka lagu xiri karo iyo suumanka taleefanka ayaa sidoo kale u adeega howlo dheeri ah sida nadiifinta shaashadda. Ka sokow soo jiidashada,kuwa haysta telefoonkaaad u kulul. Soojiidashada ayaa lagu dari karaa hayaha si ay u noqoto mid wanaagsan oo wax ku ool ah, Pretty Shiny ayaa door ka ciyaaraya sameynta soojiidashada inay noqoto sifo badan. Meel ka baxsan birta, waxaan sidoo kale ku siin karnaa PVC, silikoon, maqaar, daabac sida loo sameeyo. Adeeg farshaxan oo lacag la'aan ah iyo tusaalooyin jira oo jira ayaa la heli karaa. Haddii aad leedahay dano, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Caaryaal jira ayaa la heli karaa
Lifaaq soo jiidasho leh: dheeman, iftiin LED, nadiifiye shaashad, masax shaashadda, silsiladda kubbadda
Qurxinta: waxaa laga suray furayaasha, taleefanka gacanta, kaamirooyinka, bacaha, laabtoobyada
Cabbirrada la habeeyay, midabada, astaamaha.
Hore: Qamriga Khamriga
Xiga: Calaamadaha Grille Car & Astaanta Baabuurka
Suunka Taleefanka Gacanta
soo jiidashada biraha
soo jiidashada taleefanka birta
soo jiidashada taleefanka gacanta
kuwa haysta telefoonka
Soojiidashada Taleefoonka Kirismaska